တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ — | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် အားထုတ်တာ။ ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းပဲ ဟောရ ပြောရမှာပါ။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် တည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်းပဲ ပြောရ ဟောရမှာပါ။ တစ်ခြားဗဟုသုတတွေကတော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဗဟုသုတတွေက အများကြီးပဲ၊ စာပေ ပရိယတ်လည်းရှိတာပဲ တစ်ခြားဗဟုသုတလည်း ရှိတာပဲ။ တရားအားထုတ်ခြင်းကိုသာ ၀င်မနှောက်ယှက်ဖို့ကောင်းကြောင်း သတင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တွေဟာ အမှန်အကန်ကို ကြိုက်တယ်။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင် ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလည်း ? နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာ။ နိဗ္ဗာန်ကို သွားမယ်ဆိုရင် သံသရာလည်နေလို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်နေလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ဖြတ်ရမယ်။ ရှေ့ကဖြစ်ပျက် နောက်ကမဂ်ဆိုတာ အပျက်ကို ဖြတ်ရမယ်။ အပျက်ကို မဖြတ်ဘဲနဲ့ သင်္ခါရတွေ အစားထိုးနေရင်တော့ အလုပ်ပိုနေတာပါပဲ၊ နိဗ္ဗာန်တော့ ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ တရားအားထုတ်ခြင်းအကြောင်းကို မဟောဘဲ အခြားဗဟုသုတတွေတတ်ရင် အခြားဗဟုသုတတွေ ဟောတာက ကောင်းပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာပဲ။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ ကိုယ်ပြောကြတာပဲ။ ကျွမ်းကျင်တာတွေ အများကြီးရှိတာပဲ ပြောပေါ့။ မကျွမ်းကျင်တာကို ဘာဖြစ်လို့ ၀င်ပြောချင်ရတာလည်း။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျ တစ်ချို့နားယောင်သွားတော့ သာသနာက အင်မတန် နစ်နာတယ်။ မပိုင်ရင် မပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ပိုင်တဲ့အရာပဲ ပြောပေါ့။ စာပေအကြောင်းပြောပေါ့၊ ဗဟုသုတအကြောင်းပြောပေါ့၊ အဘိဓမ္မာလည်း ပြောချင်ရင်ပြောပေါ့။
ဒါပေမယ့် တရားအားထုတ်ခြင်း နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ မတတ်ရင် မပြောတာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက် အားထုတ်တာ မဟုတ်တော့ အိုးပြော ချိုးပြောနဲ့ အယူမှားစရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဒါကတော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
တရာအားထုတ်တယ်ဆိုတာ စိတ္တသင်္ခါရ အစားထိုးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလောက်တော့ နားလည်ထားမှ ဖြစ်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ နားယောင်ကုန်ပြီ။ ဒီတော့လည်း မသင့်တော်ပါဘူး။ အမှန်အကန်ပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အပျက်တရားကို ဆင်ခြင်တာကတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက် အဓိကဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးပါတယ်။
Tags: ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်. Bookmark the permalink.